Raw Nandrolone Soo-saaraha budada Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Nandrolone laurate budada (BAN) (Magaca calaamadaha Clinibolin, Fortadex, Laurabolin), ama budada nandrolone dodecanoate, oo loo yaqaan 19-taortestosterone 17β-laurate, waa steroid synthetic iyo anabolic steroid iyo nandrolone ester. Sida nandrolone loo isticmaalo, daawadani waxay bixisaa saameyn anabolic oo dhexdhexaad ah.
Raw Nandrolone budada Laurate (26490-31-3) video
Roog Nandrolone budada Laurate Description
Nandrolone Laureate waa magaca kiimikada walxaha firfircoon ee la yiraahdo la yiraahdo Laurabolin.nandrolone waa daawo steroid ah oo laysku duro oo ay ku jirto daawada Raw Nandrolone Laurate budada. Laurabolin wuxuu asal ahaan ka soo jeeda Deca Durabolin muddo dheer (nandrolone decanoate), oo firfircooni leh ilaa bil gudaheed jirka. Haddii ay dhibaato kaa haysato dib-u-helidda wax soo saarka tijaabada ee dabiiciga ah kadib markaad isticmaasho Deca, dhab ahaantii waxaad yeelan doontaa dhibaatooyin adiga oo isticmaalaya Laurabolin.
Ciyaalka si kastaba ha ahaatee, guud ahaan waxay daroogada u isticmaalaan asbuucle kasta. Inaad noqoto nandrolone, Laurabolin wuxuu soo bandhigi doonaa saameyno anabolic oo la arki karo oo leh saameyno daciif ah oo daciif ah.
Laurabolin wuxuu leeyahay ficilo adag oo anabolic ah oo leh sifo yar oo astrogenic ah waxaana loogu talagalay in lagu hormariyo Protein Synthesis iyada oo aan wax soo saarka saameyn aan loo baahneyn (side). Qalabkan kaniiniga ah ee unugyada ayaa u oggolaanaya ka hortagga borotiinka luminta hurgunka iyo kor u qaadidda unugyada caanaha ah. Xayawaankan ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu saxo cilladaha dheef-shiid kiimikaad, nafaqo-xumo, dhiig-yaraan iyo korriin tartiib tartiib ah.
Roog Nandrolone budada Laurate Smamnuucista
Product Name Roog Nandrolone budada Laurate
Magaca Kiimikada Raw Nandrolone budada Laurate; 26490-31-3; Nandrolone dodecanoate; UNII-WVJ22FFN83
barafku Psaliid 44-46 ℃
Boiling Point 559.78 ° C at 760 mmHg
Application Roog Nandrolone budada Laurate waa magaca kiimikada walxaha firfircoon ee Laurabolin. Qalabka daawada, steroids koritaanka murqaha. Sida hormoon lab ah iyo hormoonada anabolic. Rooga Nandrolone budada Laurate wuxuu leeyahay ficilo adag oo anabolic ah oo leh sifo yar oo astrogenic ah waxaana loogu talagalay in lagu hormariyo Protein Synthesis iyada oo aan la soo saarin saameyn aan loo baahnayn.
Waa maxay budada loo yaqaan "Raw Nandrolone Laurate" (26490-31-3)?
Nandrolone laaurate laate waa budo la isku duro oo ah nandrolone anabolic steroid. Qalabka daawada dhuratiga ah ee halkan lagu isticmaalo waa laba atomo kaarboon oo ka dheer tan dib-u-goynta, sidaas awgeed wakiilkan wuxuu dhigayaa dulsaarka daroogada oo muddo dheer soconaya agagaarka cirbadda oo ka badan Deca-Durabolin. Iyada oo la eegayo guryaha sii deynta ee dib loo dhigo, waxaa suurtogal ah in la maamulo budada laandooriga ah ee budhcada ah saddexdii illaa afar asbuucba marka lagu jiro goob caafimaad. Daawo nandrolone ah, daawadani waxay bixisaa saameyn xoog leh oo xasaasiyadeed, taas oo ay wehliyaan heer hoose oo ah guryaha estrogenic iyo iyo orogenoj. Inkasta oo aan si weyn loo isticmaalin, budada loo yaqaan 'nandrolone laurate budada' ayaa la jecel yahay cayaaraha iyo jirdhiska si ay u dhiirigeliyaan guulo isdaba-joog ah oo qumman oo qoto-dheer leh oo leh saameyn yar.
Sida Raw Nandrolone budada Laurate (26490-31-3) shuqullada
Nandrolone laurate budada waa isbedelka nandrolone, halkaas oo ah aerosofilic acid ester (lauric acid) ku xiran kooxda 17-beta hydroxyl. Isticmaalida steroids ayaa ka yaraada dabaysha oo ka badan steroids oo bilaash ah, waxaana si tartiib ah looga nuugay aagga cirbadda. Marka uu ku jiro dhiigga, qashin-qaadaha ayaa la saaraa si uu u bixiyo nandroloon lacag la'aan ah (firfircoon). Isticmaalka steroids ee loo yaqaan 'steroids' ayaa loogu talagalay inay sii dheeraato daaqada waxqabadka daaweynta ka dib markii la maamulo, taas oo u oggolaaneysa jadwalka mudista ciriiriga ah marka loo eego cirbadaha steroid bilaash ah (unsterified). Nandrolone laaurate laate ayaa loogu talagalay inay bixiso sii-deyn sii-deyn ah oo ah nandroloon ilaa illaa 3 ilaa toddobaadyada XNUM ka dib markii la duro.
Raw Nandrolone budada Laurate (26490-31-3) Qiyaasta
Ragga: Nandrolone laaurate laate ayaa loo oggol yahay isticmaalka aadanaha. Qoritaanka tilmaamaha lama heli karo. Marka loo isticmaalo ujeedo jir ahaaneed ama kor u qaadidda waxqabadka, qiyaasta 200-400 ee la siiyey maalmo kasta oo 7-10 ayaa ah midka ugu badan, laga bilaabo wareegyada 8 ilaa todobaadyada 12. Heerkani wuxuu ku filan yahay dadka isticmaala intooda badan in ay dareemaan guulo la qiyaasi karo oo ah qiyaasta murqaha iyo xoogga, taas oo ay la socoto heer hoose oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada estrogenic iyo androgenic. Qiyaaso badan (450-600 mg mg kasta 7-10) ayaa ku siin doona saameyn xoog leh oo anabolic ah, laakiin waxay noqon kartaa mid adag oo la saaro feejignaanta hooseeya ee steroidkani caadi ahaan laga helo. Taa bedelkeeda, dad badan oo door bidaya inay isku daraan wakiilkan leh steroids anabolic / androgenic . Iyada oo la eegayo hantideeda, waxay u muuqataa inay si fiican u habboon tahay labadaba ujeedo iyo jarista, waxayna si macquul ah u bedeli kartaa Deca-Durabolin wareegyada.
Haweenka: Nandrolone laaurate laate ayaa loo oggol yahay isticmaalka aadanaha. Qoritaanka tilmaamaha lama heli karo. Marka loo isticmaalo ujeedo jir ahaaneed ama kor u qaadida waxqabadka, qiyaasta 100 mg kasta 10-14 kasta oo badanaa waa kuwa ugu badan, oo loogu talagalay 4 ilaa toddobaadka 6. Inkasta oo ay yar tahay, haddana haweenku marmar ayay la kulmaan calaamadaha caabuqa marka ay qaadayaan xaruntan. Haddii fayruusku ku dhaco saameynaha daaweyntu waxay noqonaysaa mid walaac ah, daroogada waa in la joojiyaa si dhakhso ah si ay uga caawiso ka hortagga muuqaalkooda joogtada ah.
Root Nandrolone budada Laurate (26490-31-3) Faa'iidooyinka
Nandrolone laurate budada waxay leedahay ficilo adag oo anabolic ah oo leh sifo yar oo qufac ah waxaana loogu talagalay in lagu hormariyo Protein Synthesis iyada oo aan la soo saarin saameyn aan loo baahneyn (side). Qalabkan borotiinka ah ee unugyada ayaa u ogolaanaya ka hortagga borotiinka luminta hirarka iyo kor u qaadidda unugyada caanaha ah. Xayawaankan ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu saxo khaladka nukliyeerka, nafaqo-xumada, dhiig-yaraan iyo korriin qunyar socodka ah. Waxyaabaha guud ahaan waxay isku durayaan daroogada todobaadkiiba. Ahaanshaha nandrolone, budada Nandrolone laurate waxay soo bandhigi doontaa saameynta anabolic ee la dareemayo saamaynta daciifka ah ee istrogen.
Soo iibso budada Nandrolone laurate from Buyaas.com